Iinyani ezinomdla zababhali abanjengoJulio Verne, García Márquez, njl Uncwadi lwangoku
Bathi kwilizwe lezobugcisa kulapho sinokufumana khona ngaphezulu kwe-eccentric kunye nabantu "abaphambeneyo", kwaye kweli hlabathi, othandekayo nothandwayo sithi sonke, uncwadi, luyangena ngokuqinisekileyo. Namhlanje, bendifuna ukuqokelela kweli nqaku ezinye idatha, ndinomdla wokutsho kancinci, ngababhali abathile abadumileyo. Phakathi kwabo nguJulio Verne, uGabriel García Márquez okanye uShakespeare ngokwakhe. Ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi ezinye, kuya kufuneka uqhubeke nokufunda nathi. Sukuphoswa yiyo!
2 UAlvaro Mutis
Ukuba iincwadi zakhe zazidumile, mhlawumbi zonke iifilimu ezenziweyo ngenxa yemisebenzi yakhe zinjalo. Iyonke, Iimuvi ezili-95 esekwe kwiincwadi zakhe.
Imbali ithi ukusinda kwakhe, abo ukubalisa kakhulu kwiincwadi zakhe, baqala ngobomi bokwenyani beneminyaka eli-11 ubudala. Umzuzu xa wayeza kubaleka ekhaya ngenjongo yokuya eIndiya ayokuthenga isacholo kumzala wakhe, awayethandana naye kakhulu.
Yayiyiyo Umboni wekamva. Uthe ngonyaka wama-2889 siza kube sinendlela yokuhamba eya kufikelela kwi-1.500 yeekhilomitha ngeyure ...
Nguye Owona mbhali uguqulelwe okwesibini emhlabeni, ngokwe-UNESCO. Indawo yokuqala ihlala enye yeeleta ezinkulu: Agatha Christie.
Kwenziwa a ubuhlobo obukhulu noGabo wethu othandekayo, esiza kuthetha ngayo kamva. UMutis wanika uG.Márquez omnye woomatshini bokuchwetheza bokuqala kwaye nguye owamazisa kumbhali waseMexico uJuan Rulfo.
Wayezithanda kakhulu izityalo, ngakumbi ezo zimkhumbuza ilizwe lakhe lokuzalwa, eColombia. Ngokukodwa, yayiyimithi yeelamuni (enye ye-Mutis yayityalwe endlwini yakhe), imithi yebhanana kunye ne-acacias.
Waye entolongweni: Waya elubhacweni eMexico emva kokutyholwa ngokurhwaphiliza imali kwinkampani eyaziwayo apho wayesebenza khona.
Wayenezinto ezininzi, kuba wayengenguye umbhali kuphela: wayekwangutitshala, umguquleli, umvakalisi kwiRadiyo yeSizwe yaseColombia, umcebisi kwezopolitiko, umcebisi kwezamashishini, iarhente yokuhamba, umlawuli wezemidlalo, njl.
Unayo amabhaso amaninzi kunye nemihombiso: INkosana yeAsturias Award yoNcwadi ngo-1997, iNdlovukazi uSofía Award yeIbero-American Poetry ngo-1997, iCervantes Award ngo-2001 kwaye ekugqibeleni, iNewustadt International Literature Award ngo-2002.
Wayengenayo inzalaNgelishwa… Nangona wayenabantwana ababini, omnye wabo wasweleka, omnye waba nomzukulwana kodwa wasweleka engenabantwana.
Watshata umfazi okhulelweyo emdala kakhulu kunayeWayeneminyaka eli-18 kuphela ubudala kwaye u-Anne Hathaway, owayeza kuba ngumfazi wakhe, wayeneminyaka engama-26 ngelo xesha.
Ingcwaba lakhe liqalekisiwe: I-epitaph yakhe ifundeka ngolu hlobo lulandelayo, «Umhlobo olungileyo, ngenxa kaYesu, uyeke ukumba eluthulini oluvalelwe apha. Inoyolo indoda eyawahlonela la matye, yaqalekiswa isusa amathambo am ". Kukwathiwa kule ngcwaba kukho imisebenzi engashicilelwanga ukuba umbhali wabhala ebomini.
Ngaphandle kwento yokuba sele siqhelile ukubhala ifani yakhe "ngokuchanekileyo" (nangona inzima kakhulu), umbhali ngokwakhe wasayina imibhalo yakhe ngezi ndlela zilandelayo: Shakespeare, eShakspe, shakespere y UShakespeare.
Ingenise amagama angaphezu kwe-1.700, kubandakanya ezinye ezisetyenzisiweyo namhlanje: ukumangaliswa, ikratshi, ukubulala, igazi, isisa, indlela kunye / okanye ukukrokrela.
Umsebenzi wakhe "UColonel akanamntu umbhalela" yabhalwa isuka ipenury Ngokuqinisekileyo ukuba umbhali waseColombia uyakuphila. Wayehlala kwigumbi eliphezulu ehotele eParis. Okumangalisayo kukuba, kwiminyaka kamva omnye umbhali omkhulu wayeza kufika kwakuloo gunjana: UMario Vargas Llosa. Apho wabhala, kwakhona phantsi kwentlupheko, "Isixeko kunye neenja".
Ubomi bakhe kunye nomsebenzi wakhe unomdla kakhulu kangangokuba kufutshane naye baphakanyisiwe imisebenzi yobuxoki ezazingezozakhe ngokwenene. Ngaba uyifumene loo mxokelelwane weimeyile owawubizwa ngokuba yileta kaGabo yokuvalelisa? Ukuba kunjalo, xelela ukuba le leta ayibhalwanga nguye, kwaye ayibhalwanga oyena mbhali wayo.
Wayezithanda iintyatyambo ezityheli kuba wayecinga ukuba bamzisele ithamsanqa.
Ndandikholelwa kakhulu. Wayekholelwa ngokuqinileyo ukuba iminenke ngasemva komnyango, iipikoko, iintyatyambo zeplastiki okanye 'iingubo zangaphantsi' zazilishwa.
Era Umthandi wemvumi uShakira. Wayenethuba lodliwanondlebe naye ngesinye isihlandlo, kwaye ukusukela ngalo mzuzu, waqala ukumamela umculo wakhe kwaye wawuthanda. Uthe ngaye umculo wakhe unesitampu sobuqu.
Akazange afune ukuba ifilimu yenziwe ngomsebenzi wakhe owaziwayo nowona uthengwa kakhulu: "Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa."
Ukuba ukuthandile ukwazi izinto ezizodwa zaba babhali, sazise kwaye siza kukuzisela amanye amanqaku anje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ngaba uyazi zonke ezi nyaniso malunga nababhali abadumileyo?
Njengayo yonke idatha oyifakileyo, ihlaziyiwe njengekaVerne… Khange abaleke naxa wayeneminyaka eli-11 ubudala (yayiyinto yokuyila umbhali ngobomi bakhe bokuqala, isihlobo sikaVerne), kananjalo Ibali lama-2889 lelikaVerne, kodwa lelonyana wakhe. Apho ndayeka ukufunda.
kuhle kakhulu ukwazi ukuba ufundela bani. Ndiyathanda ukwazi ngezi zinto zinomdla, ndiyayithanda, enkosi